पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेको सख्या ११ पुग्योः अविरल वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित, कहाँ को अवस्था कस्तो छ ?::mirmireonline.com
पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेको सख्या ११ पुग्योः अविरल वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित, कहाँ को अवस्था कस्तो छ ?
अविरल वर्षाका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका बिभिन्न स्थानमा गएको पहिरोमा परी ११ जनाको मृत्यु भएको छ ।
हालसम्म रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, भोजपुर, ललितपुर, मकवानपुर र पर्सामा गरी ११ जनाले जनाको मृत्यु भएको हो । काठमाडौंको मुलपानीमा पनि पहिरोले पुरिएर एकैपरिवारका ३ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बारा घर भइ कागेश्वर मनहरा नगरपालिका, मुलपानी बस्दै आएका नतु यादव, सर्मिला यादव र १० वर्षीय कुन्दन यादव छन् ।
उता, बनेपा–३, नालामा भूकम्प पीडितको घरमाथि पहिरो खस्दा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते छन् । मृत्यु हुनेमा ५५ वर्षीया गोमा दंगाल र ७ वर्षीय सोहनी दंगाल छन् ।
भोजपुरमा पनि पानीको भेल घरभित्र पस्दा भत्किएको पर्खालले लागेर रामप्रसाद राई गाउँपालिका–७, बासिखोराका ६६ वर्षीय जगतबहादुर राईको मृत्यु भएको छ ।
टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–९, लेखर्कका १४ वर्षीय बालक जनक विकको पनि शौच गर्ने क्रममा पहिरोले चर्पीसहित पुरिएर घटनास्थलमै मृत्यु भएको स्थानीय अनिल कुमार राईले बताउनुभयो ।खोटाङमा ३ जना बेपत्ता भएको जनाइएको छ ।
उता, पर्साको पर्सागढी नगरपालिकामा बाढीले बगाएर एक बालकको मृत्यु भएको छ । पर्सागढी नगरपालिका वडा नं १ बस्ने १० बर्षका निखिल पटेलको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
सिंग्याही खोलामा आएको बाढीले बगाएर ल्याएको दाउरा संकलन गरिरहेका उनलाई नदीले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै उत्तरी मकवानपुरको थाहा नगरपालिका – ३ मा महाभीर खोलाले बगाउँदा घाइते भएकी बालिका सञ्चना बलामीको पनि मृत्यु भएको छ । उनलाई दम्कीबाट खोलाले बगाएर चार सय मिटर तल पुगेपछि स्थानीयले उद्धार गरी अस्पताल र्पुयाएका थिए । उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय पालुङले जनाएको छ । मुलुकका विभिन्न स्थानमा परेको अविरल वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ ।